Tottenham vs Chelsea… (Lix xiddig oo muhiim ah oo ka maqan Spurs xilli Son shaki la gelinayo & N’Golo Kante oo…) – Gool FM - Idman news
Tottenham vs Chelsea… (Lix xiddig oo muhiim ah oo ka maqan Spurs xilli Son shaki la gelinayo & N’Golo Kante oo…) – Gool FM
(London) 19 Sebt 2021. Magaalada London ayaa maanta marti gelineysa kulan kale oo xiiso gaar ah xambaarsan maanta marka ay isku arkaan kooxaha isla caasimadda England ka wada dhisan ee Tottenham Hotspur iyo Chelsea.
Kulankan oo loo yaqaano London Derby ama darbiga magaalada London ayaa kusoo aadaya xilli labada naadi ay xilli ciyaareedkan ku bilawday awood lixaad leh iyo guulo la taaban karo inkastoo toddobaadkii hore ay Spurs guuldarro kala kulantay Crystal Palace.
Si kastaba ha ahaatee, Tottenham ayaa wajaheysa culeys ballaaran oo dhanka safkeeda ah maadaama ay weyneyso xiddigo muhiim ah.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 06:30 Galabnimo xilliga Geeska Afrika.
Tottenham ayaa la tacaaleysa dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray Lucas Moura iyo Steven Bergwijn Khamiistii ciyaarihii Europa Conference League, halka Japhet Tanganga uu ganaax ku seegayo ciyaartan kaddib casaankii uu qaatay toddobaadkii hore.
Son Heung-min iyo Eric Dier ayaa shaki la gelinayaa inay ciyaartan safan karaan halka wali ay karaantiil ku jiraan xiddigaha Giovani lo Celso, Cristian Romero iyo Davinson Sanchez kuwaasoo u safray Koonfurta Ameerika si ay xulalkooda ugu ciyaaraan horraantii bishan.
Geesta kale, Chelsea ayaa ka walwal la’ dhaawacyo cusub waxaana xusid mudan inuu usoo laabanayo ciyaartan N’Golo Kante oo dhaawac kaga maqnaa ciyaarihii lasoo dhaafay.
Kaliya Christian Pulisic ayaa ka maqan Blues oo wali la tacaalaya dhaawac kasoo gaaray isagoo u ciyaarayay xulkiisa USA.
Tottenham ayaa laga dhaliyay goolal rikoor ah oo gaaraya 103 gool kulammadii ay kaga hor tagtay Chelsea horyaalka Premier League.
Spurs ayaa ka adkaatay Blues kaliya toddobo jeer iyagoo wajahay 58 jeer oo ka tirsan horyaalka Premier League.
Chelsea ayaa ka adkaa karta Tottenham saddex kulan oo xiriir ah horyaalka markii ugu horreysay tan iyo 2005.
Tottenham ayaa raadineysa inay ku furato horyaalka saddex guul oo xiriir ah oo ay garoonkeeda ku gaartay markii ugu horreysay tan iyo 2002, waxayna barbarreyn kartaa rikoorkeeda ugu fiican ee ah 12 dhibcood inay ka hesho shanta ciyaar ee ugu horreysa horyaalka haddii ay caawa guuleysato iyadoo sidoo kale markii ugu horreysay shabaqeeda difaacan karta saddexda ciyaar ee ugu horreysa garoonkeeda xilli ciyaareedka haddii aanan maanta gool laga dhalin.
Si kastaba ha ahaatee, Spurs ayaa halis ugu jirta inay soo gaarto saddex guuldarro oo xiriir ah kulammada London Derby markii ugu horreysay muddo 16 sano ah.
Harry Kane ayaa kaliya labo darbo isku dayay 200 daqiiqo oo uu Premier League ciyaaray xilli ciyaareedkan.
Kooxaha uu hoggaamiyo Macallin Nune Espirito Santo ayaa ku guuldarreystay inay gool dhaliyaan qaybta hore ee ciyaarta 83 ka mid ah 118 kulan oo uu maamulay Premier League.
Chelsea ayaa laga dhaliyay kaliya hal gool xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League waana rikoorkeedii ugu wanaagsanaa heerkan oo kale muddo 11 sano ah.
Blues ayaa adkaan karta lix kulan oo xiriir ah oo ay ciyaartay darbiga London markii ugu horreysay taariikhdeeda, waxaana horay darbiga London sidaas uga sameeyay Arsenal intii u dhexeysay 1988-1989 iyo markale 2013-2014.
Celceliska 61% shabaq difaacashada ee uu sameeyay Tababare Thomas Tuchel ayaa ah rikoorka ugu wanaagsan ee uu sameeyo macallin maamulay ugu yaraan 10 kulan oo Premier League ah, waxaana guuldarradii kasoo gaartay Aston Villa bishii May ee sanadkan ay tahay tan kaliya ee kasoo gaartay kulammada bannaanka horyaalka Ingiriiska.
Romelu Lukaku ayaa kaliya hal gool ka dhaliyay Spurs 13 kulan oo uu wajahay dhammaan tartammada.
Previous West Ham United vs Manchester United… (Rikoorka uu Ronaldo ka heysto Hammers iyo Bruno oo taariikh u dhigay ciyaartoyda Premier League) – Gool FM
Next Juventus vs AC Milan… (Turin oo marti gelineysa mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan Serie A caawa xilli Bianconeri ay…) – Gool FM